Hetsika voalohany mahakasika ny Andraikitra aratsosialin’ireo orinasa sy ny fampandrosoana maharitra notontosaina teto Madagasikara - Transparency International - Initiative Madagascar
Hetsika voalohany mahakasika ny Andraikitra aratsosialin’ireo orinasa sy ny fampandrosoana maharitra notontosaina teto Madagasikara
Nivoaka ny 15 Jolay 2016 ao amin'ny Hetsika
Ny 13 sy ny 14 jolay 2016 lasa teo dia nandray anjara tamin’ny seho voalohany teto Madagasikara mahakasika ny « RSE (Responsabilité sociale ou sociétale des entreprises) et Développement durable izay notontosaina tao amin’ny Carlton ny Transparency International-Initiative Madagascar.
Ny tanjon’ny hetsika dia ny hampifandray ireo ny fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina ary koa ny fiarahamonim-pirenena mba hanamafy ny fiaraha-mientan’izy ireo ho amin’ny fampandrosoana maharitra. Ity fotoana ity ihany koa no nanehoan’ireo orinasa lehibe ny hetsika sy ny andraikitra araekolojika raisin’izy ireo eo amin’ny lafiny sosialy, ekonomika ary tontolo iainana . Ankoatr’ireo seho teo anivon’ireo tranoeva dia nisy ny famelabelarana sy ny fifanakalozan-kevitra natrehan’ny daholobe ary koa ny atrikasa notontosain’ireo mpandray anjara tamin’ity seho ity. Ny tanjona fototra dia ny hametraka taridalana sy laminasa iraisana mba ahazoana antoka fa tena hitondra ny anjara biriky eo amin’ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara izy ireo.
Ny Transparency International-Initiative Madagascar izay mihevitra indrindra fa ny kolikoly dia sakana lehibe amin’ny fampandrosoana maharitra sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia nanentana ireo mpandray anjara tsirairay sy ny olon-drehetra mba hametraka ny ady amin’ny kolikoly ho laharampahamehana. Izany dia ho fampatsiahivana ny tanjona voalohany ny fampandrodoana maharitra "Foana ny fahantrana" ary ny tanjona faha 16: "Fandriam-pahalemana, ny rariny, ary ny rafitra mahomby".
Nanatontosa ihany koa hetsika marobe nanomboka tamin’ny taona 2014 ny sampana Transparency international eto Madagasikara mba hampitomboana ny fangaraharana sy mba hampisy ny fifampitokisana eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ny tetikasa « Kolikoly eo anivon’ny sehatra aram-panjakana eto Antananarivo CAPS (Corruption in Antananarivo’s Public Services-CAPS) » dia nahazoana nanao fandihadiana eo anivon’ny orinasa miisa 436 miorina eto Antananarivo ary nahazoana nahafantatra marina ny fandraisana sy ny fiainan’ireo mpandraharaha araekonomika eto Madagasikara ny kolikoly.
Raha liana amin’ny hetsika tontosainay ianao dia afaka mifandray aminay amin’ny alalan’ny mailaka : secteurprive@transparency.mg